DEG DEG: Ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo Dhanka Degmada Jilib U Soo Dhaqaaqay | Sahal News
You are here : Sahal News » Wararka » DEG DEG: Ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo Dhanka Degmada Jilib U Soo Dhaqaaqay
DEG DEG: Ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland oo Dhanka Degmada Jilib U Soo Dhaqaaqay
Posted by admin on October 6th, 2014 07:18 AM | Wararka
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in saaka ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubba ay ka dhaqaaqeen Degmada Kismaayo.
Ciidamadaan ayaa u dhaqaaqay dhanka Magaalada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha ciidamada Maamulka KMG ee Jubba ee ciidamada horkacaayo.
Wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada Kismaayo ka ambabaxay iminka ay ku sugan yihiin Tuulada Yoontooy oo Kismaayo ku dhaw, balse ciidanka uu halkaasi kasii ambabaxi doono sida qorshaha uu yahay.
Taangiyada AMISOM iyo gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayeey saaran yihiin ciidamadaan, waxaana ay u diyaarsan yihiin qaadista dagaal ka dhanka ah ciidamada Shabaab.
Jilib oo ah magaalo ay ku xoogan yihiin Al Shabaab ayaan la ogeyn sida ay ku wajihi doonaan ciidamadaan saaka ka dhaqaaqay Magaalada Kismaayo.
Hogaamiyaha Maamulka KMG ee Jubba Axmed Madoobe ayaa shalay shaaciyay in ay qaadayaan weeraro ka dhan ah Xoogaga Shabaab, hadii aysan isa soo dhiibin muddo ku siman 48-saacadooda sida warka uu udhigay.
Al Shabaab ayaa hada xoogooda ku aruuray Gobolka Jubbada dhexe oo ay dhamaan Degmooyinka Gobolkaasi ku sugan yihiin awood ciidana ay ku leeyihiin. Lama oga sida ay ku sahlanaan doonto qabsashada Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe.
« Dhageyso:RW Soomaaliya Md Cabdi weli Sheekh Axmed oo wali sii wada Baaqiisa Al shabaab ku wajahan
Haweenay Kurdish ah oo isku qarxisay Xoogaga ISIL »